Chepụta a Email-Enyi na Enyi | Martech Zone
Tuesday, October 18, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Adam Obere
Omume Internetntanetị niile na-egosi oke uto na ọnụọgụ ozi email ole na-agụ na ekwentị mkpanaaka. Fọdụ stats egosila na 40% nke ozi ịntanetị ụlọ ọrụ niile na-agụ na ngwaọrụ mkpanaka. N'ime ọnwa isii gara aga, ịgụ email na ngwaọrụ mkpanaka dị elu 6%! Ilele ozi ịntanetị na obere enyo nwere nsogbu na uru ya. Devicesfọdụ ngwaọrụ na-akwado HTML, ụfọdụ na-ebupụta onyogho na ndabara, ụfọdụ nwere ederede preview dịnụ tupu ha emepee email, ụfọdụ ga-atụkwa obosara nke email ahụ, ọtụtụ ga-enwekwa mpempe akwụkwọ ka ha nwee ike ịgụta ha.
Litmus Enyela ozi a na-enye ihe omuma banyere otu esi ebugo imewe email gi maka ngwa mkpanaka. Ihe omuma ihe omuma a bu ihe di nkpa n’emeputa atumatu nkpuru aru na nsogbu ndi n’eme aru oru. Ka anyị na-eru oge ezumike, ọ bụ ihe dị mkpa ịtụle mgbe ndị na-ere ahịa zipụ ozi ịntanetị… ọtụtụ ndị debanyere aha ga na-agụ ha ka ha na-azụ ahịa! Hà ga-enwe ike ịgụ nke gị?
Emere nke a nke ọma, ebiela m ya ma debe ya n’elu tebụl m ma na-ezo aka na ya mgbe mgbe. Daalụ nke ukwuu maka ịmịpụta nke a.
Nnukwu folks na http://www.litmus.com kwesiri otuto, Norma!